Best Crypto Staking Sites July 2022 | Full Learn2Trade Reviews!
အကောင်းဆုံး Crypto လောင်းကစားဝက်ဘ်ဆိုက်များ - ၂၀၂၁ တွင်ထိပ်တန်း Crypto လောင်းခြင်းပလက်ဖောင်းများ
နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 18 မေလ 2022
cryptocurrency ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုမှငွေရှာရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာတိုကင်၏စျေးနှုန်းသည်ပွင့်လင်းသောစျေး၌မြင့်တက်လာသောအခါမကြာခဏပြောလေ့ရှိသည်။ သို့သော်ဤအရာသည်အမှန်တရားနှင့်မပိုနိုင်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ယခုအချိန်တွင်အွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းများစွာသည်သင်၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို 'လောင်း' ခြင်းဖြင့် passive ၀ င်ငွေကိုရရှိစေသည်။
သင်တင်ပြသောတိုကင်များသည်သက်ဆိုင်ရာ blockchain ကွန်ယက်၏ထိရောက်မှုကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်-၎င်းသည် Proof-of-Stake (PoS) ယန္တရားဖြင့်ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသောအရောင်းအ ၀ ယ်များကိုအတည်ပြုရန်ကူညီသည်။ တစ်ဖန်သင်ရှယ်ယာ ၀ င်ရန်ဆုံးဖြတ်သောတိုကင်အရေအတွက်နှင့်အချိုးညီသောအတိုးကိုသင်ရရှိလိမ့်မည်။
ဒီလမ်းညွှန်မှာငါတို့အရမ်းသုံးသပ်တယ် ၂၀၂၁ ၏အကောင်းဆုံး crypto လောင်းကစားဆိုက်များ ၁၀ မိနစ်အောက်၌စတင်ခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုသင်လျှောက်ပါ။
eToro - ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဝယ်ယူပါ
၀% ကော်မရှင်တွင်စတော့ ၂၄၀၀ ကျော် ၀ ယ်ယူပါ
ထောင်ပေါင်းများစွာ CFDs ကုန်သွယ်
debit/credit card, Paypal (သို့) ဘဏ်ငွေလွှဲဖြင့်ငွေသွင်းပါ
အမေရိကန်အသုံးပြုသူများအတွက်အမှန်တကယ် cryptos များကိုသာရရှိနိုင်သည်
ဒီဝန်ဆောင်မှုပေးနှင့်အတူ CFDs အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သည့်အခါလက်လီရင်းနှီးမြှုပ်နှံအကောင့်အသစ်များ၏ 67% ပိုက်ဆံရှုံးသည်။
အကောင်းဆုံး Crypto လောင်းကစားဝက်ဘ်ဆိုက်များ - အကျဉ်းချုပ်
ဤတွင် ၂၀၂၁ ၏အကောင်းဆုံး crypto လောင်းကစားဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုအမြန်ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ဖြစ်သည်။
eToro: ယေဘုယျအားဖြင့် အကောင်းဆုံး Crypto Staking Site။
Kucoin: အပြိုင်အဆိုင် လောင်းကြေးအထွက်နှုန်းများဖြင့် လူကြိုက်များသော crypto လဲလှယ်မှု။
Binance: ပံ့ပိုးထားသော လောင်းကြေးအကြွေစေ့များစွာဖြင့် ထိပ်တန်းအဆင့်သတ်မှတ်လဲလှယ်။
မင်္ဂလာပါ- crypto ချေးငွေဖြင့် သင့်ဒင်္ဂါးများတွင် ဆုလာဘ်များရယူပါ။
MyContainer: အထူးကျွမ်းကျင်သူ crypto လောင်းကြေးဆိုဒ်။
ယခု Staking စတင်ပါ
ဤဝန်ဆောင်မှုပေးသူသည် CFD များရောင်းဝယ်သည့်အခါလက်လီသုံးစွဲသူအကောင့်များ၏ ၆၇% သည်ငွေဆုံးရှုံးသည်
၅ မိနစ်အတွင်း Crypto လောင်းခြင်းကိုမည်သို့စတင်မည်နည်း
ဤစာမျက်နှာကို ယခုဖတ်ရန် အချိန်မရှိပါက - အကောင်းဆုံးနှင့် စတင်ရန် အောက်ပါ Quickfire အဆင့်များကို လိုက်နာပါ။ crypto လောင်းကြေး ငါးမိနစ်အတွင်း ဆိုက်ကို
အဆင့် ၁ - eToro ဖြင့်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ပါ။ eToro - သုံးစွဲသူသန်း ၂၀ ကျော်ရှိသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအွန်လိုင်းပွဲစားသည်စျေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံး crypto လောင်းကစား site တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကောင့်တစ်ခုဖွင့ ်၍ သင်၏ ID မိတ္တူကိုတင်ခြင်းဖြင့်ဤပွဲစားနှင့်စတင်ပါ။
အဆင့် ၂: Crypto ကိုထည့်ပါ။ မင်းလောင်းကြေးတွေမစခင်မင်းရဲ့ eToro account မှာ crypto တိုကင်အချို့ရှိဖို့လိုလိမ့်မယ်။ သင့်တွင်တိုကင်များမရှိလျှင် eToro တွင် debit/credit card, e-wallet (သို့) ဘဏ်ငွေလွှဲဖြင့်အနည်းဆုံး ၂၅ ဒေါ်လာဖြင့်သင် ၀ ယ်နိုင်သည်။
အဆင့် ၃ - လောင်းကြေးများရယူပါ။ eToro သုံးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အကောင်းဆုံးအရာသည်သင်လောင်းကြေးများစတင်ရယူရန်ဘာမျှလုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့်သင်၏ eToro ပိုက်ဆံအိတ်၌တိုကင်များကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းထားရန်လိုအပ်သည်။
အထက်ပါအတိုင်းမင်း crypto တိုကင်တွေကိုမင်း eToro ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာမင်းဆန္ဒရှိသရွေ့ထားခဲ့နိုင်ပါတယ်။ ဤသို့ပြုခြင်းအားဖြင့်သင် ဆက်၍ လောင်းကြေးများဆက်လက်ခံစားလိမ့်မည်။
မှတ်စု: အရည်အချင်းပြည့်မီရန်အနည်းဆုံးရက်အရေအတွက်နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစားများကဲ့သို့သောအစုရှယ်ယာများအား eToro ကိုသုံးသောအခါထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်အချို့ရှိပါသည်။ ငါတို့ဒါကိုမကြာခင်အသေးစိတ်ရှင်းပြမယ်။
အကောင်းဆုံး Crypto လောင်းကစားမှုဆိုက် - Crypto လောင်းကစားပလက်ဖောင်းများစာရင်း
သင်၏လိုအပ်ချက်များအတွက်အကောင်းဆုံး crypto လောင်းကစား site ကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်အရေးကြီးသည်။ အားလုံးပြီးအောင်ဆက်မလုပ်ခင်ထည့်စဉ်းစားရမယ့်အချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်၊ ဥပမာ၊ ဆိုက်ကမင်းကိုရှယ်ယာခွင့်ပြုတဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးတွေ၊ အရည်အချင်းပြည့်မီဖို့တိုကင်ကိုင်ဖို့ဘယ်နှစ်ရက်လိုလဲ၊ APR ကဘာကမ်းလှမ်းချက်လဲ။
ဤအချက်များအားလုံးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ၊ ၂၀၂၁ နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်အကောင်းဆုံး crypto လောင်းကစားဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုရွေးချယ်လိမ့်မည်။
eToro - 2022 အတွက် စုစုပေါင်းအကောင်းဆုံး Crypto Staking Site
eToro သည်အဓိကအကြောင်းအရင်းများအပြည့်အစုံအတွက်စျေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံး crypto လောင်းကြေး site ဖြစ်သည်။ ပထမ ဦး စွာနှင့်အရေးအကြီးဆုံးမှာ eToro သည်အလွန်တင်းကျပ်သောစည်းမျဉ်းဖြစ်သောကြောင့်ဤပလက်ဖောင်း၏တရားဝင်မှုအတွက်စိတ်ပူရန်မလိုပါ။ ၎င်းတွင် FCA (UK)၊ ASIC (Australia)၊ CySEC (Cyprus) တို့နှင့်လိုင်စင်အပြင် SEC နှင့် FINRA (US) တို့မှခွင့်ပြုချက်တို့ပါ ၀ င်သည်။ ထို့ပြင်ပလက်ဖောင်းသည် ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှစတင်လည်ပတ်ခဲ့ပြီးယခုအခါကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ ၀ ယ်ယူသူသန်း ၂၀ ကိုဝန်ဆောင်မှုပေးနေသည်။
အဓိကအားဖြင့် eToro သည်သင့်အား ၀% ကော်မရှင်စတော့နှင့် ETF များထောင်ချီ ၀ ယ်ရန်ခွင့်ပြုသောအွန်လိုင်းပွဲစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် forex၊ ကုန်ပစ္စည်းများ၊ အညွှန်းများနှင့် crypto တွင်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနိုင်သည်။ ၎င်း၏လောင်းကြေး ၀ န်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ eToro သည်ဤအရာကိုဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုနှစ်ခုတွင်လောလောဆယ်ကမ်းလှမ်းသည်။ ၎င်းသည် Cardano (ADA) နှင့် TRON (TRX) ကိုဖုံးလွှမ်းသည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုနှစ်ခုလုံးသည်လစဉ်လောင်းကြေးအထွက်နှုန်း၏ ၉၀% အထိပါ ၀ င်သည်။ Ethereum သည်၎င်း၏လောင်းကြေး ၀ န်ဆောင်မှုသို့အခြားဒင်္ဂါးပြားများထပ်ထည့်ရန်စီစဉ်သည်။
ဤထိပ်တန်းအဆင့်သတ်မှတ်ထားသော crypto လောင်းကြေးဝန်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ အမှန်တကယ်နှစ်သက်သည်မှာ ဆုလာဘ်များရရှိရန် သင်ဘာမှလုပ်စရာမလိုပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့်၊ သင်သည် သင်၏ eToro ပိုက်ဆံအိတ်တွင် ပံ့ပိုးထားသော လောင်းကြေးအကြွေစေ့ကို ကိုင်ထားသရွေ့- သင်သည် သွားရန်ကောင်းပါသည်။ ထိုသို့ပြောခြင်းဖြင့် TRON နှင့် Cardano အသီးသီးကျင်းပသည့် 8 ရက်နှင့် 10 ရက်အထိ ဆုလက်ဆောင်များ ရရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ပံ့ပိုးပေးထားသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးကို သင်မပိုင်ဆိုင်ပါက၊ eToro သည် သင့်အား အနည်းဆုံး ရှယ်ယာ $25 ဖြင့် တိုကင်အချို့ကို ဝယ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဖြန့်ကြက်မှုမှလွဲ၍ အခြားအခကြေးငွေများ ပေးဆောင်ရန် မလိုအပ်ပါ (0.75%)။
ထိန်းညှိပွဲစားတစ်ဦးအနေဖြင့် eToro သည် fiat ငွေကြေးအပ်ငွေများကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ ၎င်းတွင် ဒက်ဘစ်နှင့် ခရက်ဒစ်ကတ်များ၊ ဘဏ်အကောင့်လွှဲပြောင်းမှုများနှင့် Paypal ကဲ့သို့သော အီး-ပိုက်ဆံအိတ်များပင် ပါဝင်သည်။ ပွဲစားသည် fiat အပ်ငွေများပေါ်တွင် 0.5% နှင့် ငွေထုတ်ခြင်းအတွက် $5 သာ ကောက်ခံပါသည်။ သင်၏အစုစုကို ကွဲပြားစေရန်ရှာဖွေနေပါက eToro သည် အခြားဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးများကို အစုအပုံလိုက်ပေးသည်။ ၎င်းတွင် Bitcoin၊ AAVE နှင့် Decentraland မှ Litecoin၊ EOS နှင့် Ethereum Classic အထိ အရာအားလုံးပါဝင်သည်။ Passive ၀င်ငွေကို ပိုမိုခံစားနိုင်စေရန် Copy Trading tool ကိုပင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကူးယူရန် အောင်မြင်သော eToro ကုန်သည်ကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်၊ သင်သည် ၎င်းတို့၏ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများကို ပုံတူကူးချနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
စျေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံး crypto လောင်းကစား site
အရောင်းအ ၀ ယ်မလုပ်ဘဲ ၁၂ လအကြာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်လှုပ်ရှားမှုမရှိခြင်း
ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အခြား Crypto လောင်းကစားဝက်ဘ်ဆိုက်များ
eToro သည် စျေးကွက်တွင် အကောင်းဆုံး crypto staking site တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိသော်လည်း၊ ပလပ်ဖောင်းသည် လူတိုင်းအတွက်မဖြစ်နိုင်ပါ။ အကယ်၍ သင်နှင့် သင်၏လောင်းကြေးငွေများ ရည်မှန်းချက်များ ရှိပါက - အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော အခြားပလပ်ဖောင်းများထဲမှ တစ်ခုကို စဉ်းစားကြည့်ပါ။
Kucoinသန်း ၂၀ ကျော်ဖောက်သည်များနှင့်နာမည်ကြီးသောအွန်လိုင်းလဲလှယ်မှု။ လောင်းကြေးမှတဆင့် passive income ကိုခံစားရန် platform ၏ 'Earn' ဌာနကို ဦး တည်ပါ။ USDT ကဲ့သို့သောသင်္ကေတများသည်နှစ်စဉ်အတိုးနှုန်း ၁၁%ကျော်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည်။
Binanceဤပံ့ပိုးသူနောက်ကွယ်မှလောင်းကြေးဖောင်သည်သန်း ၁၀၀ ကျော်သောဖောက်သည်များနှင့်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးဆုံး cryptocurrency လဲလှယ်မှုဖြစ်သည်။ Binance လောင်းကြေးဌာနသည်ကြီးမားသည်၊ သော့ခတ်ပြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရွေးချယ်နိုင်သောနှစ်ခုစလုံးပါ ၀ င်သောဒင်္ဂါးပြားအများစုတွင်ရနိုင်သည်။ Binance ၏ကိုယ်ပိုင်ဒစ်ဂျစ်တယ်သင်္ကေတ - BNB သည်တစ်နှစ်လျှင် ၉% ကျော်သာအထွက်နှုန်းကိုဆွဲဆောင်သည်။
မင်္ဂလာပါ: ဤပလက်ဖောင်းသည် crypto ငွေချေးခြင်းကိုအထူးပြုသည်။ ဒါကြောင့်မင်းလုပ်မှာမဟုတ်ဘူး နည်းပညာပိုင်း မင်းရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုမြှင့်တင်လိုက်ပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့်သင်သည်သင်၏ crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုချေးငွေရယူရန်အပေါင်ပစ္စည်းထားသည့်ပြင်ပမှငွေချေးသူများအားထုတ်ချေးလိမ့်မည်။
MyContainerအကယ်၍ သင်သည် crypto လောင်းကြေးကိုအထူးပြုသောပလက်ဖောင်းတစ်ခုကိုရှာလျှင် - သင် MyContainer ကိုစစ်ဆေးချင်ပေမည်။ ဤပံ့ပိုးသူသည် Waves, ColossusXT နှင့် Energi တို့အပါအ ၀ င်လောင်းဒင်္ဂါးပြားအမျိုးမျိုးကိုပံ့ပိုးပေးသည်။ MyContainer ရှိဆုလာဘ်များသည်အပြိုင်အဆိုင်များသော်လည်းနောက်ဆုံးတွင် staked ခံရသောသက်ဆိုင်ရာဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုပေါ်မူတည်လိမ့်မည်။
အမြဲတမ်းကဲ့သို့၊ သင်၏အထက်ဖေါ်ပြပါ crypto လောင်းခြင်း ၀ က်ဆိုက်များကိုအသုံးမပြုမီသင်၏ကိုယ်ပိုင်အိမ်စာကိုသေချာလုပ်ပါ။
အကောင်းဆုံး Crypto လောင်းကစားဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုမည်သို့ရှာရမည်နည်း
စက်မှုလုပ်ငန်းမှကမ်းလှမ်းသောအကောင်းဆုံး crypto လောင်းကစားဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုရှာဖွေရန်သင်အိမ်စာအချို့လုပ်ရန်လိုသည်။ သုတေသနလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖြတ်သန်းတဲ့အခါမှာစောင့်ကြည့်ရမယ့်အဓိကအချက်အလတ်တွေရှိတယ်၊ ငါတို့ကအသေးစိတ်ကိုအောက်မှာအသေးစိတ်ရှင်းပြထားပါတယ်။
ထောက်ပံ့ထားသော Staking Coins များ
ပထမဦးစွာ၊ အဓိကအနေနှင့်၊ သင်သည် လောင်းကြေးငွေဒင်္ဂါးများကို ပံ့ပိုးထားသည်ကို ကြည့်ရှုရန် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ၏ ဝဘ်ဆိုက်ကို စစ်ဆေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ Stablecoins များသည် လောင်းကြေးအတွက်ဖြစ်သည်။ ရေပန်းအစားဆုံး ရွေးချယ်မှုဖြစ်သော်လည်း ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများလည်း စိတ်ကူးယဉ်တတ်ကြသည်။ Cardano, Ethereum၊ Polygon နှင့် အခြားဒင်္ဂါးများစွာ။ သေချာတာကတော့ သင့်မှာ လောင်းကြေးချလိုတဲ့ တိကျတဲ့ဒင်္ဂါးပြားတစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင်၊ ပလပ်ဖောင်းက ၎င်းကို ပေးဆောင်ကြောင်း သေချာစေရပါမယ်။ သေချာတာကတော့ သင့်မှာ လောင်းကြေးချလိုတဲ့ တိကျတဲ့ဒင်္ဂါးပြားတစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင်၊ ပလပ်ဖောင်းက ၎င်းကို ပေးဆောင်ကြောင်း သေချာစေရပါမယ်။
မင်းလောင်းထားတဲ့ site နဲ့အကောင့်ဖွင့်စရာမလိုဘဲမင်းဒါကိုလုပ်နိုင်တယ်၊ ဒါကြောင့်ဒီအဆင့်ကရိုးရှင်းပါတယ်။
သင်သတ်မှတ်ပြီးသည်နှင့် သင်ရွေးချယ်ထားသောဆိုဒ်သည် သင်နှစ်သက်ရာကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ လောင်းကြေးအကြွေစေ့ထို့နောက် ကမ်းလှမ်းမှုတွင် မည်သည့်အထွက်နှုန်းများရှိသည်ကို လေ့လာရန် လိုအပ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဤကဏ္ဍတွင် လောင်းကြေးတင်ပလပ်ဖောင်းနှစ်ခုသည် တူညီခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ပံ့ပိုးသူတစ် ဦး သည် Tether လောင်းခြင်းကို ၁၁% ပေးသည်၊ အခြားပလက်ဖောင်းတစ်ခုတွင် ၇% သာနိမ့်သည်ကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။ အဆုံးစွန်ဆုံးမှာမင်းရဲ့အလားအလာရှိတဲ့အမြင့်ဆုံးကိုမြှင့်တင်နိုင်အောင်မင်းရဲ့တိကျသောလောင်းကြေးအကြွေစေ့အတွက်အမြင့်ဆုံးအထွက်နှုန်းကိုပေးမယ့်ပံ့ပိုးသူကိုရွေးချင်လိမ့်မယ်။
အခုမင်းရဲ့အကြွေစေ့မှာလောင်းကြေးကဘာလဲဆိုတာမင်းသိတဲ့အတိုင်းမင်းအခုသက်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းတွေကိုကြည့်ဖို့လိုတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်၏လောင်းကြေးဒင်္ဂါးများကိုအနည်းဆုံးအချိန်တစ်ခုအတွင်းသော့ခတ်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ဤကိစ္စသာဖြစ်ပါကရွေးနှုတ်ခြင်းကာလကုန်ဆုံးသည်အထိသင်၏လောင်းကြေးဒင်္ဂါးများကိုသင်ရယူနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
အချို့သောပလက်ဖောင်းများသည်ပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်လောင်းကြေးတင်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုပေးသည်။ ဤအရာသည်သင်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်တိုင်းတွင်သင်၏ဒင်္ဂါးများကိုလောင်းကြေးမှထုတ်ယူနိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ ထိုပြောကြားချက်နှင့်အတူပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်လောင်းကြေးအစီအစဉ်အတွက်ရွေးချယ်သောအခါ APR သည်နိမ့်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်သင့်သည်။
ဤလုပ်ငန်းတွင်အကောင်းဆုံး crypto လောင်းကစားဝက်ဘ်ဆိုက်များသည်ပင်လျှင်ငွေရှာရန်စီးပွားရေးလုပ်နေကြသည်။ ထို့ကြောင့်ပလက်ဖောင်း၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးချရန်အချို့သောအခကြေးငွေကိုသင်မျှော်လင့်သင့်သည်။ ကိစ္စအတော်များများတွင်၊ သင်ရရှိသောလောင်းကြေးများမှ ၀ န်ဆောင်ခအနည်းငယ်ကိုယူလိမ့်မည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူသည် ၁၀% ကောက်ခံပြီး၊ တစ်လလုံးတွင်သင် crypto နှင့်ညီမျှသောဒေါ်လာ ၅၀၀ ရလျှင်၊ ပလက်ဖောင်းသည်ဒေါ်လာ ၅၀ ရလိမ့်မည်။
သင်၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ရန်ပုံငွေများနှင့်ခွဲထွက်ခြင်းမပြုမီ သင်သည် crypto လောင်းကြေးပံ့ပိုးပေးသူတစ်ဦးထံ သင့်အိမ်စာလုပ်ရမည်ဟု မပြောဘဲနေပါသည်။ ဤသည်မှာ eToro သည် စျေးကွက်တွင် အကောင်းဆုံး crypto လောင်းကြေးဆိုဒ်ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ထင်ရသည့်အကြောင်းရင်းများစွာထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည် - အကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီက စီမံခန့်ခွဲသောကြောင့်၊ FCA, CySECနှင့် ASIC.
ပွဲစားကိုလည်း SEC နှင့် FINRA တို့ကထောက်ခံသည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏အကြွေစေ့များသည် eToro တွင်ကောင်းမွန်စွာကြည့်ရှုနေကြောင်းသင်ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည်။ ထိုအရာနှင့်အတူ crypto လောင်းကစားဝက်ဘ်ဆိုက်အများစုကိုလုံး ၀ ထိန်းချုပ်ထားခြင်းမရှိသောကြောင့်သင်၏အရင်းအနှီးမှာအန္တရာယ်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
Crypto Staking ဖြင့်မည်သို့စတင်ရမည်နည်း
ဤစာမျက်နှာ၏အစောပိုင်း၌ကျွန်ုပ်တို့သည် crypto လောင်းကြေးတင်ခြင်းကိုမည်သို့စတင်ရမည်ကိုအမြန်မီးလမ်းညွှန်ပေးခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း၊ သင်သည်လောင်းကြေး၏အခြေအနေတွင်ပြီးပြည့်စုံသောအတွေ့အကြုံမရှိသေးလျှင်ဤအရာသည်သင့်အတွက်မလုံလောက်ပေ။
ဤကိစ္စတွင်ပါက ၂၀၂၁ တွင်အကောင်းဆုံး crypto လောင်းခြင်း site ကို eToro မည်သို့စတင်နိုင်ပုံကိုအသေးစိတ်လမ်းညွှန်ချက်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
အဆင့် ၁: eToro အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ပါ
eToro crypto လောင်းကြေး ၀ န်ဆောင်မှုမှအကျိုးရရန်သင်ပထမ ဦး စွာအကောင့်တစ်ခုဖွင့်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ တစ်ဖန်၎င်းသည်ပွဲစားကုမ္ပဏီအားကြီးလေးသောစည်းမျဉ်းဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်အမည်မသိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုခွင့်မပြုနိုင်ပါ။
သတင်းကောင်းမှာသင်သည်အဆုံးမှအဆုံးသို့အကောင့်ဖွင့်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ၅ မိနစ်ထက်မနည်းဖြည့်စွက်ပေးနိုင်သည်။ ပထမ ဦး စွာ 'Join Now' ခလုတ်ကို နှိပ်၍ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုရိုက်ထည့်ခြင်းဖြင့်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါ။ သင်တို့သည်လည်းသင်၏အဆက်အသွယ်အသေးစိတ်များပေးရန်နှင့် username နှင့် password တစ်ခုဖန်တီးရန်လိုအပ်သည်။
အဆင့် ၂: KYC
KYC (သင့်ဖောက်သည်ကိုသိပါ) လုပ်ငန်းစဉ်သည်နာကျင်စေသော်လည်း eToro တွင်သင်၏စာရွက်စာတမ်းများကိုချက်ချင်းအတည်ပြုလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာသင်၏အစိုးရထုတ်ပေးသော ID ၏မိတ္တူနှင့်ယခင် ၃ လအတွင်းထုတ်ပေးခဲ့သောလိပ်စာအထောက်အထားနှင့်ပြည့်စုံသောအထောက်အထားတို့ဖြစ်သည်။
လူအများစုသည်ဘဏ်စာရင်းရှင်းတမ်း (သို့) အသုံး ၀ င်ငွေတောင်းခံလွှာကိုရွေးချယ်ကြသည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်မိတ္တူများသည်အဆင်ပြေသည်။
အဆင့် ၃ - Crypto (အနည်းဆုံး ၂၅ ဒေါ်လာ) ၀ ယ်ပါ။
eToro တွင်သင်၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုတွင်မင်းလောင်းကြေးဆုများရနိုင်သောတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာသင်၏အဓိကပိုက်ဆံအိတ်အစုစုတွင်တိုကင်များကိုကိုင်ထားရန်ဖြစ်သည်။ အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရလျှင်သင်မလုပ်ရသေးပါက eToro မှ cryptocurrency အချို့ ၀ ယ်ရန်လိုလိမ့်မည်။ သတင်းကောင်းမှာကုန်သွယ်မှုတစ်ခုလျှင်အနိမ့်ဆုံးရှယ်ယာသည် ၂၅ ဒေါ်လာသာဖြစ်ပြီးသင်ဖြန့်ရန်သာလိုသည်။
၎င်းသည် eToro သည် အာကာသအတွင်း ဈေးအသက်သာဆုံး cryptocurrency ပွဲစားများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်စေသည်။ ထို့အပြင်၊ သင်သည် သင်၏ cryptocurrency ဝယ်ယူမှုအတွက် ဒက်ဘစ်/ခရက်ဒစ်ကတ်၊ e-wallet (အပါအဝင်၊ PayPal က) သို့မဟုတ် ဘဏ်အကောင့်။ eToro တွင် ဒက်ဘစ်/ခရက်ဒစ်ကတ်ငွေပေးချေမှုများအတွက် 3.99% ကောက်ခံသည့် Coinbase နှင့်မတူဘဲ၊ ၎င်းသည် သင့်အား 0.5% သာ ကုန်ကျမည်ဖြစ်သည်။ တကယ်တော့ သင်သည် US တွင် အခြေစိုက်ပြီး USD ဖြင့် အပ်ငွေများရှိပါက ဤ 0.5% အခကြေးငွေကို လျှော့ပေါ့ပေးပါသည်။
အဆင့် ၄: Crypto လောင်းခြင်းကိုစတင်ပါ
ငါတို့စောစောကမှတ်သားခဲ့သည့်အတိုင်း eToro တွင်လောင်းကြေးများစတင်ရယူရန်သင်ဘာမှလုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ၎င်းအစားဤအရာသည်အကျုံး ၀ င်သောအကြွေစေ့ကိုကိုင်ရုံဖြင့်တွန်းကန်လိမ့်မည်။
ပြန်ချုပ်ရန်၊ ၎င်းသည် လက်ရှိတွင် Cardano နှင့် အကျုံးဝင်သည်။ Tron – သင့်အကောင့်အတွင်းမှ လောင်းကြေးဆုများ စတင်မထုတ်ပေးမီ သတ်မှတ်ထားသော ရက်အရေအတွက်ကို ကျော်သွားရန်လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းသည် Cardano အတွက် 10 ရက်နှင့် TRON အတွက် 8 ရက်ဖြစ်သည်။
မင်းရဲ့ eToro account မှာလောင်းထားတဲ့ဒင်္ဂါးပြားတွေကိုမင်းကိုင်ထားသရွေ့မင်းဆုတွေဆက်ရလိမ့်မယ်။ သို့သော်သင်၏ cryptocurrency ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုမည်သည့်အချိန်မဆိုငွေသားထုတ်နိုင်သည်။ သင်လုပ်သည့်အခါသင် ၀ င်ငွေများ ၀ င်လာတော့မည်မဟုတ်ပါ။
အကောင်းဆုံး Crypto လောင်းကစားဆိုက်များ: နိဂုံးချုပ်ရန်
ဤလမ်းညွှန်သည်ယနေ့စျေးကွက်၌အလွန်အကောင်းဆုံး crypto လောင်းကစားဆိုက်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့သည်။ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်ပလက်ဖောင်းများစွာရှိသော်လည်း eToro နှင့်၎င်း၏ဇာတိလောင်းကစား ၀ န်ဆောင်မှုသည်လူအုပ်ကြားတွင်ထင်ရှားသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့သည်။
ဤအဆင့်သတ်မှတ်ထားသောပလက်ဖောင်းကိုလူ ဦး ရေသန်း ၂၀ ကျော်အသုံးပြုပြီးကြီးကြီးမားမားထိန်းချုပ်ထားသည်၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးနယ်ပယ်တွင်နာမည်ကောင်းရှိသည်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သူများအတွက်စံပြဖြစ်သောထောက်ပံ့ထားသောအကြွေစေ့တစ်ခုပိုင်ဆိုင်ခြင်းဖြင့်ရိုးရှင်းစွာလောင်းကြေးများရနိုင်သည်ဟူသောအချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်သည်။
အကောင်းဆုံး crypto လောင်းကစား site ကဘာလဲ။
eToro သည်အလုံးစုံအကောင်းဆုံး crypto လောင်းကစား site တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဒီပလက်ဖောင်းကိုကြီးကြီးမားမားထိန်းချုပ်ထားတယ်၊ ဒါကြောင့်မင်းရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးရန်ပုံငွေတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုစိတ်ပူစရာမလိုဘူး။ မင်းရဲ့ eToro ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာသက်ဆိုင်ရာတိုကင်ကိုရိုးရိုးလေးကိုင်ပြီး TRON နဲ့ Cardano နှစ်ခုလုံးမှာလောင်းကြေးတွေရနိုင်ပါတယ်။ ပိုမိုနီးကပ်သောအနာဂတ်အကြွေစေ့များကိုမကြာမီကာလအတွင်း eToro ပလက်ဖောင်းထဲသို့ထည့်လိမ့်မည်။
Crypto လောင်းကြေးသည်သင်၏ပျင်းရိသောဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအတိုးရရန် passive နည်းလမ်းတစ်ခုပေးသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်သက်သေအထောက်အထားများကိုသက်သေခံအထောက်အထားကွန်ရက်တွင်အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရာတွင်ကူညီရန်အသုံးပြုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
မင်းလောင်းတဲ့အခါ crypto ကိုသော့ခတ်ဖို့ဘယ်လောက်ကြာမလဲ။
၎င်းသည်သင်အသုံးပြုနေသော crypto လောင်းကစား site ကဲ့သို့အချက်များစွာပေါ်တွင်မူတည်လိမ့်မည်။ အချို့သောပလက်ဖောင်းများသည်သင်၏တိုကင်များကိုအချိန်မရွေးထုတ်ယူခွင့်ပြုနိုင်သောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အကောင့်များကိုပေးသည်။ အခြားသူများကတိုကင်များကိုအနည်းဆုံးရက်များအထိသော့ခတ်ရန်လိုအပ်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ crypto လောင်းကြေးသည်သင်၏ cryptocurrencies များတွင်ပုံမှန် ၀ င်ငွေရရှိရန်တရားဝင်နည်းလမ်းတစ်ခုကိုပေးသည်။ သို့သော်သက်ဆိုင်ရာတိုကင်များ၏တန်ဖိုးသည် open market တွင်ကျဆင်းသွားနိုင်သည်ကိုသင်သတိရရန်လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်အတိုးရနိုင်သော်လည်းသင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏အလုံးစုံတန်ဖိုးနှင့်အညီသင်ငွေဆုံးရှုံးနိုင်သည်။
အကောင်းဆုံး crypto လောင်းကြေးအကြွေစေ့ကဘာလဲ။
ယေဘူယျအားဖြင့်ပြောရင်ဒီအကြွေစေ့ကပိုတည်ငြိမ်တယ်၊ လောင်းကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အထွက်နှုန်းနည်းတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်တစ်နှစ်လျှင် ၁၀၀% ကျော်လောင်းကြေးရနိုင်သောဒစ်ဂျစ်တယ်တိုကင်အသစ်တစ်ခုကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ သို့သော်သင်သည် Ethereum ကဲ့သို့တည်ထောင်ထားသောတိုကင်တစ်ခုကိုရွေးချယ်လျှင်သင်သိသိသာသာလျော့နည်းလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ဤအရာသည်အသက်စွန့်ခြင်းနှင့်ဆုလာဘ်၏သဘောတရားအတိုင်းလိုက်နာသည်။